I-15 yeSikolo soBunjineli boMbane oBalaseleyo kwiHlabathi liphela
Matshi 1, 2022 UAdaeze Nwachukwu
Izikolo ezi-15 eziBalaseleyo zoBunjineli boMbane kwiHlabathi liphela
Nazi iiyunivesithi eziboniswe kuluhlu oluphezulu lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi ezivulekileyo ukuba zamkele abafundi basekhaya nakwamanye amazwe.
Ngaba uyafuna ukulandela ikhondo lomsebenzi wobunjineli bombane, ufuna ukuba yinjineli yombane eqinisekisiweyo? Zininzi iiyunivesithi kwihlabathi liphela ezibonelela ngeenkqubo zobunjineli bombane, kodwa ukwazi iziko elifanelekileyo lokukhetha kunokuba nzima kwaye kuxanduva.
Ewe kunjalo, ukufunda nayiphi na inkqubo yobunjineli yombane kuyo nayiphi na iyunivesithi okanye ikholeji ukuze ube yinjineli yombane kunzima kakhulu kwaye kufuna inani elifanelekileyo leminyaka ukuyiphumeza, kodwa isiphelo sokugqibela ngokuqinisekileyo siya kuhlawula kakuhle.
Yintoni ubuNjineli boMbane?
Benza ntoni iinjineli zombane?
Kunzima kangakanani kubunjineli bombane?
Ngaba iinjineli zombane zifunwa?
Zisebenza phi iinjineli zombane?
Leliphi ilizwe elona lifanelekileyo kwisifundo sobunjineli bombane?
Zeziphi ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane?
Izikolo ezili-15 eziBalaseleyo zoBunjineli boMbane
IYunivesithi yaseIllinois (UIUC)
I-Carnegie Mellon University (CMU)
I-Georgia Institute of Technology
IZiko leTekhnoloji laseCalifornia (iCaltech)
IYunivesithi yaseMaryland (UMD)
IColorado School of Mines
Ubunjineli bombane kukucinga koyilo, ukwakha kunye nokugcinwa kwezixhobo zombane esele zikhona, izakhiwo, izixhobo, oomatshini kunye neenkqubo. Ikwabandakanya uphando ekufumaneni iindlela ezintsha kunye nemithombo yombane ngokuziphatha okungafaniyo kombane ojikelezayo kuzo zonke ezinye izinto.
Iinjineli zombane zinomsebenzi wokuvelisa izixhobo zombane neze-elektroniki eziqinisekisiweyo nezikwaziyo ukwenza ngokufanelekileyo umsebenzi ezazidalelwe ukuba zenziwe. Bayabandakanyeka kuphando nakwimveliso yezixhobo zombane ezisebenzisa umbane kunye neemveliso ukunceda ukugcina amandla kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle.
Njengobunjineli konke malunga netekhnoloji, kulungile ukuba uqaphele ukuba ubunjineli bombane lisebe kwezobunjineli elijongana ikakhulu netekhnoloji yombane. Ngaphandle kombane, itekhnoloji ibingayi kukhula ukuya kuthi ga ngoku.
Njengonjineli wombane, unokuba kwishishini lokudala izixhobo ezitsha zombane, uyilo lweenkqubo zombane ezintsha kunye neeprototypes okanye ukugcina izixhobo zombane esele zakhiwe okanye iinkqubo.
Injineli yombane nayo inokubaluleka kwicandelo lophando lombane, ifumanisa imithombo emitsha yombane, indlela yokuguqula amandla ombane, isifundo esinzulu kwicandelo lombane ukufumana ezinye izinto zombane kunye neendawo zombane ezihlawulisiweyo.
Ubunjineli bombane ayisiyondlela enzima okanye ikhondo lomsebenzi. Inomdla, ijolise kwiziphumo kwaye ineempawu ezininzi zophando kunye nokuzilolonga. Ingabonakala inzima kwasekuqaleni ngenxa yeeseshoni ezininzi ezisebenzayo kodwa njengoko uqhubeka kwaye uqhela iinkqubo kunye neeprotocol, uya kuqala ukuyiqonda le khosi.
Olu luhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane eziboniswe apha zenzelwe ukukunceda ufumane ezona zikolo ziphezulu emhlabeni ukuze ube namava apheleleyo obunjineli bombane. Ezi zikolo ngokuqinisekileyo ziya kwenza amava obunjineli bombane angabi nzima kwaye azalisekise ngakumbi.
Isantya sophuhliso lwetekhnoloji kwihlabathi namhlanje, ngaphandle kwamathandabuzo iinjineli zombane zifunwa kakhulu. Ukusuka kwii-microchips kwezinye zezixhobo ze-elektroniki esizisebenzisayo ukuya koomatshini abakhulu kwiifama nakwimizi-mveliso, iinkonzo zeenjineli zombane zifunwa kakhulu.
Njengenjineli yombane, ungasebenza kubunjineli obukhulu bombane kunye nobumsulwa, imveliso kunye namanye amashishini kunye namaziko kwihlabathi liphela njengamashishini aselwandle, amashishini ezithuthi, amashishini e-aerospace, amashishini okwakha, amashishini okuvelisa amandla, amashishini eoyile kunye negesi, amashishini onxibelelwano ngomnxeba. , amashishini okwakha njalo njalo.
Ukuba ufumana ishishini laselwandle njengenjineli yombane, ungasebenza ebhodini njengenxalenye yeqela lombane kwinqanawa ukuqinisekisa ukuba inqanawa ikwimeko entle ngombane ngalo lonke ixesha okanye iyahanjelwa kuwo nawuphi na umphezulu wombane. Unokusebenza kwizibuko lechweba ukunceda ekugcineni iinkqubo zombane apho okanye ukwakha ezitsha ukulungiselela iinjongo ezithile.
Ukuba ufumanisa kulo naliphi na elinye ishishini njengenjineli yombane, inkcazo yomsebenzi wakho inokuthi inxulunyaniswe ngandlela ithile njengoko ihlala ixhumeka ukulungisa iinkqubo zombane, ukwenza uphando kummandla wombane, kunye nokwakha inkqubo yombane esebenzayo.
IFransi, i-United States, iJamani, ubukumkani obumanyeneyo, iCanada, i-Australia zezinye zezona zikhetho ziphambili kwiindawo ezifanelekileyo zokufumana isidanga sobunjineli bombane.
Ngokwenyani, lonke ilizwe elilungileyo kufuneka okungenani libe neyunivesithi enye ubuncinci indawo ephakathi yokufunda ubunjineli bombane xa kuthelekiswa nemigangatho yehlabathi.
Lilonke, ukuba ufuna ukufumana okona kulungileyo kwikhondo lomsebenzi wobunjineli bombane, kuyacetyiswa ukuba ufumane ezona zikolo zibalaseleyo kwindawo yakho yobunjineli bombane. Kukho izikolo ezininzi kwihlabathi liphela ezilungileyo ngokwaneleyo kwikhondo lomsebenzi wobunjineli bombane ngaphandle kwezi zidweliswe apha. Ngenxa yoko, sibeke eli nqaku kwi-15 ephezulu yezi yunivesithi zobunjineli zombane kwihlabathi elithathwa njengelona lifanelekileyo.
Ukuba awukwazi ukuyenza nakweyiphi na kwezi yunivesithi, kuya kufuneka ufumane esinye sezikolo kwindawo yakho elungileyo kwezobunjineli bombane kwaye ubhalise. Ukuba useKhanada, unokujonga kwinqaku lethu ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo kwaye uthathe isigqibo sokuba ungakhetha apho.
Ukuba ukwimanyano, unokujonga ezinye ezikhoyo iiyunivesithi zobunjineli eziphakathi ekwabonelela ngeenkqubo zobunjineli zombane kunye needigri.
Senze ukuba kufumaneke uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi ezinokuba nomdla kuzo ukuba wazi. Ezi yunivesithi ngokoluhlu lwe-QS ayizizo iiyunivesithi ezilungileyo kakhulu zobunjineli bombane kodwa zibekwa ngokubanzi phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo emhlabeni.
Apha, ndiza kukubeka kuluhlu lweeyunivesithi ezi-15 ezilungileyo kwihlabathi ukulandela ikhondo lakho lobunjineli.
ICarnegie Mellon University
Isikolo seMigodi iColorado.
IYunivesithi yaseStanford yiyunivesithi engenzi nzuzo yabucala eseStanford, California. Eyasungulwa ngo-1885 nguLeland noJane Stanford bekhumbula umntwana wabo okuphela kwakhe, uLeland Stanford Jr. owasweleka ngenxa yentsholongwane ye-typhoid eneminyaka eyi-15.
Isebe lobunjineli bombane kwiYunivesithi yaseStanford lasekwa e1894, 9yrs emva kokuba iyunivesithi isekiwe, iyenza ukuba ibe lelinye lawona masebe amadala obunjineli bombane emhlabeni.
I-Stanford ibonelela ngeenkqubo ezi-3 ezahlukileyo zobunjineli bombane, ezona zaziwa kakhulu yinkqubo yesiDanga se-Master.
I-Stanford ibonelela ngesiDanga seSayensi esona siphambili kubuNjineli boMbane nethuba lokuphanda kunye nokulinga iiprojekthi. Umfundi unokukhetha enye kwezi zinto zintathu zoqeqesho ukuze agxile kuzo:
Isixhobo seHardware kunye neSoftware.
Inkqubo yoLwazi kunye neNzululwazi.
Itekhnoloji yePhysical and Science.
Ukuba unomdla kwinto ehambele phambili kubunjineli bombane, awuyi kufumana bunzima ekwenzeni iYunivesithi yaseStanford ukuba ikhethe
Ndwendwela isikolo apha
Kucacile ukuba iHarvard yenye yeekholeji zobunjineli zombane ezigqwesileyo emhlabeni. Yiyunivesithi yabucala engenzi nzuzo ebekwe eCambridge, eMassachusetts. Yayisungulwa kwi-1636 kwaye yabekwa kwi-2nd kuhlelo lwe-2020 lweekholeji ezilungileyo kunye neeyunivesithi zikazwelonke.
IHarvard yaziwa kwihlabathi liphela ngokugqwesa kwizifundo, nto leyo emenza ukuba abe yenye yezona yunivesithi zidumileyo ehlabathini. IHarvard ebandakanya izikolo ezili-13 kunye namaziko kwaye likhaya kwiSikolo seNjineli esiphakamileyo kunye neeNzululwazi eziSebenzayo ezivelisa umsebenzi wokuphayona kuqeqesho lobunjineli boMbane.
Iinkqubo zobunjineli boMbane;
Ukufundisisa eHarvard Collage njengomfundi owenza isidanga sokuqala kukuveza kwiindawo ezininzi zophando ukusuka kwizixhobo ukuya kwiinkqubo.
Njengenye yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi, abafundi baseHarvard bafundiswa ukugxila kwiinkqubo zokwakha ezinengqiqo, ezihlalutya kunye nokunxibelelana nehlabathi. Aba bafundi badlulela ngaphaya konxibelelwano nje lweengcingo, bayila iisenzi, uhlalutyo, ubalo kunye neenkqubo zolawulo; Kananjalo ndenza imisebenzi ephambili ekusetyenzisweni kolwazi. Oku kude ngaphaya kwezinto onokuzifumana kwezinye iiyunivesithi zobunjineli zombane kwihlabathi liphela.
Ulwazi olusisiseko lwemathematika kunye nesayensi ngokubanzi yinto efunekayo njengoko izenzo zeenjineli zombane eHarvard zisekwe kwezi.
Isebe lezobunjineli kwezombane kwiYunivesithi yaseHarvard linika ingxelo ngokusemthethweni ukuba iinjineli zombane eyunivesithi zilandela imisebenzi yedayimani yokubumba; izixhobo zobungakanani; Iisekethe ezihlanganisiweyo zebhayoloji yeselula; iirobhothi zesikali semilimitha; izixhobo zekhompyutha zokufunda ngomatshini; ukwenziwa kwezinto ezinamandla zombane kunye nezinye iinkqubo zenethiwekhi; ukuphazamisa imiqondiso yobuchopho kunye nokwenza imephu yemijikelezo yobuchopho; Ukucoca ulwazi kwiidatabase ezinkulu ze-stochastic; kunye nemida esisiseko yokwabelana ngolwazi lwangasese.
Ezi zakhono zifunwa kakhulu kwezi ntsuku kwaye zonke zinomvuzo omkhulu nazo. Injineli yombane egxile nakwezinye izakhono okanye indibaniselwano ezimbini nangaphezulu ikeyiki eshushu ebaleni. Esi sesinye sezizathu zokuba sidwelise iHarvard njengenye yeendawo ezilungileyo zokufunda ubunjineli bombane kwihlabathi namhlanje.
E-Harvard, bonke abafundi bezoBunjineli boMbane bagxile kwiisekethi zombane kunye nezixhobo ezibanika ithuba lokuphonononga ezinye iindawo ezininzi ezinje;
Inkqubo yo lawulo
Umqondiso kunye nenkqubo yethiyori.
Iindawo zophando kwisebe le-EE eHarvard ikakhulu ziiSekethe kunye ne-VLSI, ubuNjineli beKhompyuter kunye ne-Architecture, iRobotics & uLawulo kunye nokuPhathwa kweMpawu Iyunivesithi ibonelela ngeBA kunye neB.sc kubuNjineli boMbane.
IYunivesithi yaseMichigan yunivesithi yophando yoluntu enkulu kakhulu e-Ann Arbor, e-USA. Njengenye yeyona yunivesithi indala yaseMichigan, isikolo sibonelela ngeyona nkqubo yobunjineli yombane ilungileyo kwihlabathi. Eyasungulwa ngo-1817 eDetroit, iyunivesiti ilungu elisekayo loMbutho ophezulu weeYunivesithi zaseMelika.
KwiYunivesithi yaseMichigan, ubunjineli bombane buhamba kunye nobunjineli bekhompyuter phantsi kwecandelo lobuNjineli boMbane kunye neKhompyutha (ECE) yeYunivesithi.
Eli sebe lelinye lawona ahlonitshwayo kungekuphela nje eMichigan kodwa ilizwe ngokubanzi ligxile kwi-smart electronics, amandla kunye namandla, ulwazi, unxibelelwano, i-automation kunye nerobhothi. Ezi yinxalenye yobunjineli bombane onokuthi ungeva ngayo kwezinye izikolo zeEE kwihlabathi liphela.
Ubunjineli bombane kunye nobunjineli bekhompyuter beza njengezikhundla ezahlukileyo phantsi kweli sebe. Amagorha amabini ngokweSebe ahlala abekwa phakathi kwe-7 ukuya kwe-5 e-US nakwilizwe liphela nge-USNews kunye neNgxelo yeHlabathi.
Apha ngezantsi kukho isebe le-ECE ekufuneka liyenzile malunga nezi majors;
Eyona nto iphambili kubunjineli bombane inika isishwankathelo esibanzi sobuchule obubandakanya itekhnoloji yolwazi, iisekethi, unxibelelwano olungenazingcingo, iirobhothi, amandla kunye namandla, i-optics, i-nanotechnology, izixhobo zekhompyuter, ulawulo, i-electromagnetics kunye nokunye. Yeyona nto ibaluleke kakhulu kwilebhu ngakumbi kwiiklasi eziphezulu, ke ukuba uyayithanda imisebenzi yezandla, uya kuyonwabela le nto iphambili.
Eyona nto iphambili kubunjineli bekhompyuter ijolise ngakumbi kwizixhobo zekhompyuter kunye nesoftware, kunye neenkqubo ezingeneyo. Kusekho okuninzi kwezandla-kwiiprojekthi, njengoko yonke into kwezi ntsuku ilawulwa ngandlela thile ngekhompyuter.
Ukuba wamkelwe kweli sebe kwi-anhy ye-majors, uya kujoyina abanye abafundi ukuqhuba izinto ezintsha ngokuguqula iitekhnoloji ukuphucula impilo, okusingqongileyo, ukuzinza, ukhuseleko, amandla, iirobhothi, idatha enkulu, nokunye okuninzi. Oku kuya kukubeka phambili, ukuphanda, ukusombulula nokusombulula iingxaki ezikhoyo zehlabathi namhlanje.
Ividiyo ye-youtube engezantsi liSebe laseYunivesithi yaseMichigan lobunjineli bombane kunye necompyuter linika incopho yento oyilindeleyo apha.
Le yunivesithi yiyunivesithi enkulu yophando yabucala ebekwe kwisiXeko saseDurham, eMantla Carolina eMelika. Yayisekwa ngamaWesile kunye namaQuaker kwidolophu yanamhlanje yeTrinity kwi1838.
UDuke yenye yeyunivesithi ebalaseleyo yokufunda ubunjineli bombane kwihlabathi. Inkqubo yesidanga sobunjineli eDuke ijikelezwe zezinye iindlela ezinje;
Njengenye yeyona yunivesithi ibalaseleyo yobunjineli bombane emhlabeni, ubuchwephesha bobunjineli bombane babekwa kwinqanaba le-5th kuphando kunye nemveliso kubunjineli bombane e-US. Iyunivesithi ikwabekwa njengeyona yunivesithi ibalaseleyo ye-7th e-US kubunjineli bombane yiKholeji yeNyaniso.
IYunivesithi yaseDuke ikwabekwa kuluhlu lweekholeji zaseMelika ezihlawula uninzi lwabafundi bezobunjineli yi-CNBC.
Oku kunakanwa kunye namabhaso aya kuxela ukuba ilungile kangakanani iyunivesithi yase-duke kwaye oku kubalwa ukuba kutheni belwenzile olu luhlu lwezona zikolo zibunjineli zombane zibalaseleyo kwihlabathi liphela.
Kwakhona, isebe lobunjineli boMbane laseDuke linenye yeenkqubo zobunjineli boMbane eziguquguqukayo ezikhoyo.
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign yiyunivesithi yoluntu eyasekwa ngo-1867 eChicago.
Iyunivesithi ibekwe kwi-48 kuhlelo lwe-2020 lweeKholeji eziGqwesileyo kunye neeDyunivesithi zeSizwe. IYunivesithi inkulu ngokwaneleyo ngokwenani labafundi.
Njengenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kubunjineli bombane kwihlabathi liphela, iYunivesithi yaseIllinois ikhuthaza abafundi ukuba bagqibe ubuncinci ii-internship (ezihlala zihlawulwa) ngaphambi kokuphela kwenkqubo yabo yokuphucula ulwazi lwabo lwezifundo kunye nokwakha iprofayili yomsebenzi wabo. Iyunivesithi ipapasha imisebenzi ekhoyo kunye noqeqesho lwabafundi kwi-intanethi yabo uqeqesho kunye nebhodi yomsebenzi.
Iyunivesithi ikwaqhuba ii-REUs (amava oPhando kwizidanga zokuqala) apho abafundi abenza isidanga sokuqala banikwa amathuba okugqiba iiprojekthi zokwakha amakhondo ngehlobo. Abafundi bahlawulwa ngexesha lale nkqubo ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukuba banokuhlawula iindleko zabo zokuhlala kunye nezinye iindleko ngalo lonke ixesha abalichitha kuyo nayiphi na inkqubo ye-REU.
ISebe lobuNjineli boMbane esikolweni libonelela ngezifundo kwiindawo ezingaphantsi kubandakanya;
Amabala kunye neeWave
Ukuqhubekeka kwesiginali ye-Analog, kunye
ILebhu yeeNkqubo zeDijithali.
KwiYunivesithi bonke aBafundi boBunjineli boMbane bayafikelela kwiLebhu ePhambili yoYilo ebanika amava asemgangathweni kwicandelo lobunjineli bombane.
IYunivesithi yasePrinceton yunivesithi yophando yabucala engenzi nzuzo ebekwe kwihlomela-dolophu iPrinceton, eNew Jersey. Eyasungulwa ngo-1746 e-Elizabeth njengeKholeji yaseNew Jersey Iziko lafudukela eNewark ngo-1747, emva koko kwi-site yangoku emva kweminyaka engama-1896. Yabizwa ngokuba yiYunivesithi yasePrinceton kwi-XNUMX.
Njengenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi liphela, iYunivesithi yasePrinceton inceda abafundi ukuba bafumane amandla kubunjineli bombane ngokugcina kungekuphela nje ukufundisa nokuqeqesha ngombane nakwizinto ze-elektroniki kodwa ukubabhenca nakwezinye iinkalo ezininzi ezinje ngesayensi yekhompyuter, izixhobo zesayensi, amandla, ifiziksi, ibhayoloji , i-neuroscience, ezoqoqosho, ulawulo, imigaqo-nkqubo yoluntu kunye nezinye iinkalo.
Yunivesithi inikeza Isithwalandwe kwaye iiprogram zezifundo kwinjineli yombane, yamkelwe ngokufanelekileyo yiKhomishini yoQinisekiso lwezoBunjineli kwa-ABET.
Isemester nganye, kukho inkqubo "evulekileyo yendlu" ehlelwe lisebe labafundi abenza isidanga sokuqala enika aba bafundi elona thuba libalaseleyo lokubonisa iiprojekthi zabo kwaye bathethe ubuso ngobuso kunye noonjingalwazi kunye neenjineli zobunjineli ukuze bafumane amava nezikhokelo yintoni ubunjineli bombane.
Isikolo seYunivesithi yasePrinceton sobunjineli sinikezela ngeBachelor yeSayensi kubuNjineli boMbane. Iikhosi zibandakanya:
Ukucwangciswa koMqondiso weSitatistiki.
Ukuguqulwa kwamandla eSolar.
Itekhnoloji yabucala yophando eyunivesithi esePittsburgh, ePennsylvania. Eyasungulwa ngo-1900 ngu-Andrew Carnegie njengezikolo zeCarnegie Technical. Ikholeji yobunjineli kwi-CMU ikwinqanaba lesi-5 kuzwelonke (Iindaba ze-US kunye neNgxelo yeHlabathi).
Iyunivesithi idume ngokufumana amabhaso awaziwayo ngokusebenza nomfundi ukusombulula iingxaki ezinkulu kwezenzululwazi nakwezobuchwephesha ngokusebenzisa iindlela ezohlukeneyo.
ICarnegie Mellon ISebe lezoBunjineli boMbane libonelela ngeenkqubo eziGuquliweyo zeBachelors Degree ezibonelela ngesiseko esomeleleyo kwizakhono ezibalulekileyo ze-ECE ezinika isithuba sokuba umfundi wabo angene kwindawo yabo enomdla. Umfundi unokukhetha enye kwezi ndawo zintlanu zilandelayo zoxinzelelo
Izixhobo zesayensi kunye neNanofabrication
Umqondiso kunye neNkqubo
IYunivesithi yaseCarnegie Mellon idweliswe phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi ngezizathu ezininzi ezifanelekileyo. Isebe labo le-EE lelona likhulu kwikholeji yobunjineli besikolo kwaye likhokele iminyaka kuphando nakwimfundo.
Iyunivesithi ifuna uVavanyo Jikelele lweGRE kubo bonke abafake izicelo kwaye ikwafuna amanqaku ovavanyo e-TOEFL angekho ngaphantsi kwama-84 kwindawo enye yokuhlala yabafundi bamanye amazwe.
Nantsi enye eyunivesithi elungileyo yobunjineli bombane ekufuneka uyijongile. Iziko lobuchwephesha laseGeorgia yiyunivesithi yophando yoluntu ebekwe eAtlanta, Georgia. Ukuseka ngomhla we-13 ka-Okthobha u-1885.
Isikolo sibonelela ngeyona nkqubo yobunjineli yombane e-US nakwilizwe liphela. Sibekwe njengesi-4 sesona sikolo sigqibeleleyo sobunjineli bombane kunye ne-6th efanelekileyo kwiinkqubo zobunjineli zombane kwi-US.
IGeorgia ibonelela ngamathuba ophando amaninzi kubafundi kubandakanya iNkqubo ye-ECE yoPhando lwaMathuba oPhando (i-UROP).
Iimpawu zeNkqubo yoBunjineli boMbane.
Isikolo saseGeorgia Tech soBunjineli boMbane neKhompyuter (i-ECE) sibhekisa kubafundi nakwiziko labo njengaba “benzi bezinkcinkce, abadali, kunye nabenzi bemilingo abenza ukuba yenzeke.” into ethathela ingqalelo kulindeleke ukuba umfundi afune ukuthatha inxaxheba kwi-B.Sc yabo entsha. Kwinkqubo yobunjineli boMbane.
Amathuba ophando abandakanya:
Inkqubo yoPhando lwaBafundi
Inkqubo yeeProjekthi eziHlanganisiweyo eziQhelekileyo
Inkqubo yamathuba okufunda ngophando (UROP)
Kwakhona kwi-Georgia Tech's, iB.Sc. kubuNjineli boMbane unika amathuba amahle okuba abafundi bazibandakanye kwiiprojekthi ezintsha.
IZiko leTekhnoloji laseCalifornia (iCaltech) yenye eyunivesithi yophando yabucala ePasadena, California. Yasekwa njengesikolo sokulungiselela kunye nesobugcisa nguAmos G. Throop kwi1891.
UCaltech olilungu loMbutho weeDyunivesithi zaseMelika yenye yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bombane kwihlabathi. ICaltech yenqanaba le-12 kuhlelo lwe-2020 lweeKholeji eziGqwesileyo kunye neeDyunivesithi zeSizwe.
ECaltech, kukho intsalela kwizifundo zaseklasini, elebhu kunye namava oyilo lomfundi
ISebe labo loBunjineli boMbane libonelela ngenkqubo yeBachelor of Science kwiindawo ezingaphantsi ezibandakanya;
Iimpawu, iiNkqubo, kunye noTshintsho.
ILebhu yeProjekthi ye-Elektroniki.
IYunivesithi yePurdue eyongeza kwinani lezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi luphando loluntu eyunivesithi eWest Lafayette, eIndiana. Iyunivesithi yasekwa kwi-1869.
IYunivesithi yasePurdue iphakame inesitetimenti semishini "sokukhokela kunye nokukhokela ilizwe lase-Indiana, ilizwe, kunye nobuchwephesha kwihlabathi liphela ngobunjineli bombane kunye neekhompyuter, ngokufundisa isizukulwana esilandelayo seenjineli, ngokufumanisa ukuba luqhubela phambili ulwazi olusisiseko kunye nokusetyenziswa kwalo. , nangokwenza izinto ezintsha nokuzibandakanya ukujongana nemiceli mngeni kwimpembelelo yoluntu ”. Inkqubo yobunjineli yombane yePurdue okwangoku ibekwe njengeyona 9th ilungileyo.
ISebe lezoBunjineli boMbane neKhompyuter kwiYunivesithi yasePurdue libonelela ngesiDanga seSayensi esinemvelaphi eqinileyo kwifiziksi nakwimathematics. Abafundi balungiselelwe kakuhle ikhondo kwicandelo lobuNjineli boMbane.
Iikhosi zabo eziphambili zibandakanya:
Uhlalutyo lweSekethe yomgama.
Imilinganiselo ye-elektroniki kunye neTekhnoloji.
Uhlalutyo lweesekethe zombane kunye noYilo
Nantsi enye iyunivesithi yoluntu enkulu ngokwamanani abafundi. IYunivesithi yaseMaryland iyunivesithi yophando kawonkewonke ehlala kwiDolophana yaseKholeji, eMaldin. Yasekwa ngonyaka ka-1856. Iyunivesithi ibekwa kwi-22nd yunivesithi yesizwe ephezulu (i-2018 US News kunye neeNgxelo zehlabathi)
ISebe lezoBunjineli boMbane neKhompyutha kwi A. James Clark School of Engineering UMD yenza izisombululo zethekhinoloji ezintsha kuluhlu olubanzi lweendawo ukusuka kunxibelelwano olugcinwe ngesandla kwiiphaneli zelanga; Ukusuka kwiipemaker zentliziyo ukuya kwiirobhothi ezizimeleyo; Ukusuka kuthungelwano olungenazingcingo ukuya kubuchwephesha benjini obuchonge ii-pathogen eziyingozi
Ngomsebenzi wokubonelela ngemfundo esemagqabini kubuNjineli boMbane neKhompyuter kubafundi abenza isidanga kunye nabaphumelele, iYunivesithi yaseMaryland iqeqesha abafundi ukuba babe ziinjineli zobungcali, beqhuba uphando olwenziweyo, olwahlukeneyo.
IYunivesithi yaseFlorida yiyunivesithi yophando yoluntu eGainesville, eFlorida enabafundi abaninzi. Lilungu eliphezulu leNkqubo yeYunivesithi yaseFlorida esekwe ngo-1853.
IYunivesithi yaseFlorida ibonelela ngeeBachelors ezininzi zeNzululwazi kubunjineli boMbane ngokukhethekileyo kwiZixhobo ze-Elektroniki kunye neeSekethe ze-Electromagnetics, aMandla kunye nePhotonics iikhompyuter zonxibelelwano kunye neeNkqubo kunye noLawulo. Isebe libonelela ngee-majors ezimbini, enye kubunjineli beKhompyuter kwaye enye kubunjineli boMbane.
Amasebe obuNjineli boMbane anezixhobo ezimbaxa zeelebhu kunye neenkqubo zophando ezahlukeneyo ezinceda kuzo zombini iindlela zovavanyo kunye nezethiyori kubunjineli bombane kunye neekhompyuter.
Isebe le-ECE ligxile kuphando olusisiseko kwi-cybersecurity, Biomedical Engineering, Software, Automotive & Aerospace, Internet of Things (IoT) kunye ne-Smart Power.
Le Yunivesithi yiyunivesithi yabucala yophando e-Evanston, e-Illinois. Yayisungulwa kwi-1851 ngamadoda alithoba anjongo yawo yayikukuseka iyunivesithi eya kuthi isebenze kwiNorth West Territory. Iyunivesithi yiyunivesithi yabucala ekumgangatho ophezulu kwindawo leyo.
ISebe lezoBunjineli boMbane kunye neNzululwazi yeKhompyuter lelona likhulu kwiSikolo saseNorthwestern McCormick soBunjineli.
Eli sebe libonelela ngesiDanga seNzululwazi kwiNjineli yoMbane esisiseko kubunjineli bombane nakwiiMasters zesayensi kubunjineli bombane nakwi-Ph.D. kubunjineli boMbane.
Inkqubo yesebe lombane kunye nekhompyuter iyaguquguquka njengoko ivumela abafundi ukuba balandele icandelo labo lomdla nokuba kubunjineli bombane okanye kubunjineli bekhompyuter.
Isikolo semigodi saseColorado lelinye iziko lophando loluntu elilinganiswe phakathi kweyona yunivesithi zikarhulumente zifunda ubunjineli bombane kwihlabathi. Efumaneka eGolden, eColorado, eUnited States, isikolo sasekwa kwasekuqaleni e-1874 sisebenzela amashishini emigodi.
Ukusuka kwi-2016 ukuya kwi-2019 yeQS yokubeka indawo eyunivesithi ibekwa kwiziko eliphambili kwihlabathi kubuNjineli beMigodi kunye neMigodi. Ijolise kwinzululwazi nakubunjineli, apho abafundi kunye necandelo lobuchule badibene khona bajongana nemiceli mngeni emikhulu ejongene noluntu namhlanje- ngakumbi ezo zinxulumene noMhlaba, kunye nezoBunjineli boBume beNdawo.
Kwisikolo semigodi iColorado, inkqubo yobunjineli yombane ibonelela ngoqeqesho olusemagqabini, amava ophando kunye nokufunda okusekwe kwiprojekthi, ngokukhethekileyo kwi-eriyali nakunxibelelwano olungenazingcingo, ulwazi kunye neenkqubo zesayensi kunye neenkqubo zamandla kunye namandla ombane kunye namathuba amaninzi okusebenza kumacandelo ohlukeneyo.
KwiFakhalthi, abafundi kuwo onke amanqanaba aqala kwisidanga sokuqala banethuba lokwenza uphando ngenkxaso yecandelo. I-faculty yayo inobuhlobo obuqinileyo namaqabane aliqela asekhaya nakwamanye amazwe ukwenza ukuba kube lula ngakumbi ukuba abafundi babo bafikelele kwizifundo ezihlawulwa ngala mashishini, bakhe iprofayili yomsebenzi wabo kwaye bazenzele amathuba ngamashishini amakhulu kwicandelo lombane.
Ezi zikolo zili-15 zidweliswe apha njengezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zombane kwihlabathi azikhange zivavanywe liqela lethu, endaweni yoko yimibutho ethembekileyo njenge-US News kunye neNgxelo yeHlabathi. Sibakhethile ngenxa yokuba babebekwa njani phakathi kwezinye iiyunivesithi emhlabeni kwaye sagqiba kwelokuba sibavavanye ukuze bafumane ezinye iinkcukacha zokuba kutheni bekwindawo ephezulu kangaka emva koko sibabonise kuluhlu lwethu lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bombane.
Kwelinye inqaku lethu elifana neli, siphonononge upapasho uluhlu lwe Iiyunivesithi ezilungileyo kakhulu kwiinkqubo zobunjineli ngokubanzi Kwaye senze olunye uluhlu ku Ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli ezinezifundo zabafundi kwaye uninzi lweeyunivesithi ezikolu luhlu ziyenze yalapho nayo.
Izikolo ezili-13 zeZikolo zeNjineli zeKhompyutha kwiHlabathi liphela
I-15 yezeMisebenzi yoBunjineli ehlawula kakhulu eCanada
I-15 zeYunivesithi eziGqwesileyo eziBalaseleyo kwiAfrika
I-10 yeentlobo zeyona misebenzi yeenjineli zobunjineli ngoku
IiNyuvesi zeNjineli eziphezulu ze-15 e-Ontario
Uhlobo lobunjineli bombaneeyunivesithi yobunjineliizikolo zobunjineli zombaneiiyunivesithi zobunjineli eziphezulu zombane e-usaIiyunivesithi eziphezulu ze-ms kubunjineli bombane kwihlabathiUhlobo lwezobunjineli zombaneUdidi lwehlabathi lweeyunivesithi ze-ms kubunjineli be-elektroniki
Post Previous:Iindleko eziphezulu ze-13 zoNyango kunye neKhowudi kwiKhosi yeKhosi yeNdleko
Okulandelayo Post:I-50 + iZikolo zeZonyango eziGqwesileyo eMelika zoBuchule obahlukeneyo
Pingback: I-10 yeeDyunivesithi zoBunjineli boMbane eziBalaseleyo e-UK 2021
Pingback: I-13 iiyunivesithi eziPhezulu ze-MS kwiNzululwazi yeKhompyuter kwi-World 2021
Pingback: I-10 yeeDyunivesithi eziBalaseleyo eNew York zaBafundi beZizwe ngezizwe